वीर अस्पतालको ल्याब रिर्पोट शुल्क ५० प्रतिशत सस्तो - Business World
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८ | ४:४३:०१
नेपालको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो वीर अस्पतालले थप सेवा विस्तार गरिँदै ल्याब रिर्पोट शुल्क ५० प्रतिशत सस्तो गरिएको जनाइएको छ । बिरामीले ल्याब रिपोर्ट लिन अस्पताल धाइनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य समेत भएको छ । अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतका अनुसार ल्याबलाई अपग्रेड गरेर बिरामीको रिपोर्ट इमेल तथा मोबाइलमै पठाउन थालिएको हो ।
उनका अनुसार एक हप्ता अगाडीबाट बिरामीको रिपोर्ट इमेल तथा मोबाइलमै पठाउन सुरु गरिएको छ । डा. बस्नेतले भने, ‘जसले गर्दा रिर्पोट लिन आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।’ वीरले अन्य अस्पतालको भन्दा धेरै सस्तोमा परीक्षण गर्ने गरेको छ।
सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । डा. बस्नेतले भने, ‘अन्य अस्पतालको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा सेवा दिएका छौँ ।’ वीरले नन कोभिडका साथै कोभिड सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल १ हजार ५ सय हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेको छ । त्यसैगरी, अस्पतालले २४ सै घण्टा पिसिआर परीक्षणको सुविधा सञ्चालन गरेपछि नन् कोभिडका बिरामीलाई सहज हुन थालेको छ ।
अस्पतालले केही समयदेखि २४ सै घण्टा पिसिआर परीक्षणको सुविधा सुचारु गरेको थियो । हाल कोरोना संक्रमितलाई भन्दा पनि परीक्षणले नन् कोभिडका बिरामीलाई उपचारमा निकै सहज बनाएको अस्पतालका डा. बस्नेतले बताए ।
‘कोरोना संक्रमणको सहज परीक्षणले आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामी, आइसियु तथा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई निकै फाइदा भएको छ,’ उनले भने। हाल वीरले एक हजारमा पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको छ।
तर, अन्य निजी अस्पतालले भने २ हजार ५ सयसम्म लिने गरेका छन्। भदौ १६ गतेबाट सुरु भएको २४ घण्टे पिसिआर परीक्षणमा हालसम्म ६५ हजार ३०६ जनाले परीक्षण गराइसकेका छन्। जसमध्ये १० हजार ९१२ जनमा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
‘पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट २४ घन्टाभित्र उपलब्ध हुन्छ। अन्य ल्याबको भन्दा सस्तोमा परीक्षण तथा गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौँ,’ डा. बस्नेत दावीका साथ भन्छन्।
त्यसैगरी, अस्पतालले फोटो र क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। जसले गर्दा वीरले दिएको ल्याब रिर्पोट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीयता मानिन्छ।
हाल अवैध पिसिआर ल्याबको धन्दा बढिरहेको छ। त्यस्तै, अस्पतालले पोस्ट कोभिड ओपिडी तथा पोस्ट कोभिड आइसियु पनि सञ्चालन गरेको छ।
धेरैजसो बिरामीहरू कोरोना संक्रमण पश्चात् सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लागिरहने, थकाई लाग्नेजस्ता लक्षण लिएर अस्पताल आउने गरेका छन्। उनीहरूका लागि ओपिडी सेवा छुटाइएको डा. बस्नेतले बताए। दैनिक ३०–४० जना बिरामीहरू पोस्ट कोभिड उपचारका लागि ओपिडी सेवा लिने गरेका छन्।